Caafimaad Ahaan.. Xagee Fiican In Habeenkii Taleefoonka La Dhigo? | Xaqiiqonews
Caafimaad Ahaan.. Xagee Fiican In Habeenkii Taleefoonka La Dhigo?
Anton Yastrebov oo ah agaasimaha machadka “Life Space Ecology” ayaa shaaca ka qaaday in ay haboon tahay qofka uu taleefonada ismaartiga ah dhigta meel ka fog madaxiisa ugu yaraan 1 mitir xilliyada hurdada habeenkii.
Isaga oo la hadlaayey idaacadda Ruushka laga leeyahay “Sputnik” waxa uu tilmaamay khabiirka in ay jiraan dad badan oo taleefoonadooda ismaartiga ah habeenkii dhigtaan meel u dhaw barkinta ..haddaba goormaa arintani ay sababeysaa xaalad caafimaad?
Sida uu ku doodaya khabiirkan, markii ay soo baxeen taleefonada gacanta lagu qaato dhaqaatiirta waxa ay muujiyeen cabsi ku aadan halis ka dhalan karto shucaaca taleefoonadan gaar ahaan waxa ay ka cabsan jireen in shucaacan uu sababo kansar laakiin gadaal waxaa laga ogaaday in aysan jirin wax xaqiijinaya cabsida.
Cabsida noocaas ah ayaa hoos u dhacday, madaama inta badan taleefonada noocan ah la soo marsiiyo sheybaaro caafimaad kuwaasi oo lagu soo xaqiijiyo in aysan halis ku aheyn caafimaadka, iyadoo taasi ay jirto haddana ma la sameynin daraasado ku filan oo ku saabsan qaabka taleefoonadan ay u saameynayaan xubanaha iyo nudayaasha hoose ee jirka.
Waxaa uu leeyahay “Si guud, qofka waa in uusan ku hurdin meel u dhaw taleefoonada ismaartiga ah, waa in uusan barkinta hoos ka geshinin taleefoonka, waa in uusan dhigin meel madaxiisa u dhaw, waa in uu ka fogaadaa masaafo dhan1 mitir ama ugu yaraan nus mitir.
Waxa uu intaasi ku daray : masaafadaas waa in la sii dheereeyaa gaar ahaan qofka marka uu ku sugan yahay meelaha baadiyaha ah maxaa yeelaya shucaaca ka soo baxa teleefoonada waa uu sii kordhaa mar walbo oo uu qofka ka fogaado “xarunta anteenada”.
Waxa uu leeyahay “Markii ay fogtahay anteenada sida tuulooyinka oo kale, taleefoonka waxa uu isticmaalaya tamar badan, si uu u raasado xiriirka anteenada, taasi oo kordhineysa shucaaca, sidaa darteed qofka waa in uu iska fogeeyaa marka uu hurdaayo”.
Khabiirka waxa uu kula talinayaa qofka adeegsanaya taleefoonada ismaartiga in uu isticmaalo dhagaha waayrleska ah si qofka u yareeyo halista uu kala kulmi karo shucaaca.